सूचना-प्रविधि Archives - नागरिक रैबार
६ दशकमा बदलियो चुनाव प्रचार शैली : ‘फिजिकल’देखि ‘डिजिटल’सम्म
काठमाडौं । स्थानीय चुनाव आउन १२ दिन बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले आइतबार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूका निम्ति नगद पुरस्कारसहितको प्रतियोगिता आह्वान गरेको छ । आयोगको सूचनामा भनिएको छ ‘…आयोगले तयार पारेको सन्देशमूलक भिडियोहरूलाई टिकटक बनाई वा पहिलेकै स्वरुपमा २०७९ वैशाख २९ गतेभित्र फेसबुक, यूट्युब, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्ने, सेयर गर्ने र २०, ३० र ५० […]
इन्टरनेट बन्द नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले इन्टरनेट सेवा निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्थाले कर विवादका इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने चेतावनी दिएका बेला आयोगले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले इन्टरनेट अवरुद्ध भएमा निर्वाचन व्यवस्थापन समेत कठिनाई हुने भएकाले […]
गोरखापत्र संस्थानका पूर्वमहाप्रबन्धक पक्राउ
काठमाडौं । गोरखापत्र संस्थानका पूर्वमहाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय पक्राउ परेका छन् । बैंकिङ कसूर सम्बन्धी एक मुद्दामा फरार प्रतिवादी भएका उनलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी सुदिप गिरीले बताए ।गिरीका अनुसार उनलाई चन्द्रगिरिबाट पक्राउ गरेर अदालत बुझाइएको छ । अनलाइन खबरबाट
अन्तरिक्षमा जान पाउने मानिस संसारकै भाग्यमानी हुन् भन्ने लाग्छ हामीलाई । अन्तरिक्षमा गएर त्यहाँको अनौठो तथा रोमाञ्चक संसारको अनुभव लिन पाउने मौका अर्बौंमा केही मानिसलाई मात्र प्राप्त हुन्छ । तर अन्तरिक्षयात्री बन्नु हामीले सोचेजस्तो सजिलो तथा रमाइलो मात्र छैन । अन्तरिक्षयात्रीहरूले यस्ता कतिपय अनुभव पनि गर्नुपर्दछ जुन दर्दनाक हुन्छन् : जस्तै मिर्गौलाको पत्थरी । नासाको […]
स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) प्रतिकार्यका लागि कर्मचारी माग गरेको छ । कोरोनाभाइरस कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्यका लागि ८ जना कर्मचारी माग गरिएको सूचनामा उल्लेख छ । सातै प्रदेश एक÷एक जना र एक जना व्यवस्थापन महाशाखाका लागि गरी आठ जना कर्मचारी माग गरेको हो । शुक्रबार जारी सूचनामा फार्मेसी वा जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातक गरेको वा फार्मेसी […]
वैज्ञानिकले बनाए अँध्यारोमा रंगीन फोटो खिच्ने क्यामरा
काठमाडौं । मानिसमा कुकुर तथा माहुरीमा जस्तो घ्राण शक्ति हुँदैन, न त चमेरोको जस्तो श्रवण शक्ति । तर मानिसमा देख्ने क्षमता भने अब्बल हुन्छ । यति हुँदा पनि मानिसमा अँध्यारोमा देख्ने क्षमता भने हुँदैन । साथै परावैजनी र इन्फ्रारेड किरणमा पनि मानिसले देख्दैन । अँध्यारोमा देख्न नसक्ने मानिसको यहीँ अक्षमतलाई दूर गर्नका लागि अमेरिकी वैज्ञानिकहरुले […]
नेपाली सेनाले विभिन्न निकायका पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको लगानीमा सञ्चालित विभिन्न निकायका रिक्त पदहरुमा सेनाले दरखास्त आह्वान गरेको हो । सोमबार प्रकाशित सूचनाअनुसार सैनिक कल्याणकारी महानिर्देशनालय, चिकित्साशास्त्र महाविद्यालय, कृषि विज्ञान संस्थान, सैनिक आवासीय विद्यालय, सैनिक महाविद्यालय, नेपाली सेना सुपथ मूल्य क्यान्टिनलगायतका निकायमा दरखास्त आह्वान भएको हो । खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा करारमा […]
जंगीअड्डाले ठूलो संख्यामा सैन्य पदमा स्थायी पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ ।​ जंगीअड्डा भर्ना छनोट निर्देशनालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सैन्य पदको ४ हजार सिटका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो । खुलातर्फ २ हजार ९८ सिट छ भने समावेशीतर्फ महिला, आदिवासीरजनजाती, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्टै कोटा छ । जसअनुसार महिलामा ३५८, […]
काठमाडौं । गुगलका बारेमा कुनै थप परिचय आवश्यक छैन । इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैले आफ्ना जुनसुकै प्रश्नको जवाफ गुगलसँगै खोज्दछन् । गुगलसँग हरेक विषयका हरेक शीर्षकको बारेमा जानकारी हुन्छ, चाहे त्यो कुनै पनि देशसँग सम्बन्धित होस् । तपाईको दिमागमा उठ्ने जुनसुकै सबालको गुगलले सरल तरिकाले जवाफ खोजिदिन्छ । तर गुगलले तपाईका हरेक प्रश्न […]
नेपाली सेनामा जागिर गर्ने अवसर(सूचनासहित)
काठमाडौँ: नेपाली सेनामा रोजगारीको अवसर खुलेको छ। भर्ना छनौट निर्देशनालयले लेखा उप सेनानी प्राड उप सेनानी, पाइलट उप सेनानी र विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत पदहरूको लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो। पहिलो पटक चैत १४ गते प्रकाशित सूचनामा नेपाली सेनामा रिक्त रहेका पदहरू खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने उल्लेख छ। योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले […]
यस्ता धेरै शब्द र अक्षरहरू हुन्छन् जुन हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा बोल्दै तथा सुन्दै आएका हुन्छौं । तर कहिलेकाहीँ त्यस्ता शब्द वा अक्षरहरू किन त्यस हिसाबले बोलिन्छ वा लेखिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । यस्तै हामी प्रायः आफ्नो आसपासका मानिसहरूलाई देखेर वा सुनेर पनि यस्ता शब्द लेख्न वा बोल्न सुरु गर्दछौं । हामीले हजारलाई अंग्रेजी अक्षर […]
भूमि आयोगले माग्यो करारमा कर्मचारी (सूचनासहित)
काठमाडौं, फागुन २५ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले विभिन्न २ पदमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीको माग गरेको छ । सर्भेक्षक र अमिन पदमा करारमा काम गर्नका आयोगले १ सय ९९ जना कर्मचारी माग गर्दै आवेदन खुला गरेको हो । इच्छुक र योग्य व्यक्तिले ७ दिन भित्रमा आवेदन दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेका पाँचौँ तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदको लिखित परीक्षा स्थगन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतद्वारा आयोगका नाममा जारी गरेको उत्प्रेषण आदेशानुसार यही फागुन १४ देखि चैत २६ गतेसम्म सञ्चालन हुने पूर्वनिर्धारित प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक–अप्राविधिक पदको लिखित परीक्षा स्थगनको सूचना प्रकाशन गरिएको छ । […]
गुगल म्याप्सको गज्जबको फिचर, इन्टरनेटविना पनि बाटो देखाउने
सूचना प्रविधिको वर्तमान युगमा हाम्रो दैनिक जीवनका धेरै काममा कुनै न कुनै एपको सहयोग चाहिने भएको छ, चाहे त्यो सपिङ होस् वा बैंकिङ । गुगलको लोकप्रिय एपको रुपमा रहेको गुगल म्याप्स पनि निकै उपयोगी एपको रुपमा रहेको छ । यो एपको मद्दतले तपाईंले संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर बाटो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ । तर गुगल म्याप्स […]
प्रहरी गर्यो कारागार भित्रबाट अवैध मोवाईल बरामद
नागरिक रैबार/बाजुरा ५ फागुन। कारागार भित्रबाट प्रहरीले ३ वटा मोवाइल बरामद गरेको छ । विहिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी नायव निरिक्षक नारायण सिंह नेगीको कमाण्डमा खटिएको प्रहरीको टोलीले कारागार भित्र चेकजाँच गर्दा ४ वटा मोवाईल बरामद गरेकाे हाे । कारागार कार्यालयमा रहेका कैदी थुनुवाहरुले मोवाईल लुकाइ छिपाइ चलाई रहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा चेकजाँच […]
ब्याट्री निकाल्न नमिल्ने स्मार्टफोन किन बनाइयो ?
काठमाडौं । कुनै समय थियो जब मोबाइल फोन खोलेर त्यसको ब्याट्री निकाल्न सकिन्थ्यो । कतिपय मानिसहरु आफूसँग यति धेरै ब्याट्री राख्दथे कि आफ्नो फोनमा नयाँ–नयाँ ब्याट्री हालेर चलाउँदथे । बजारमा फोनभन्दा धेरै ब्याट्री हुन्थे । मोबाइल पुरानो भएर ब्याट्रीको आयु सकिँदै गएपछि नयाँ ब्याट्री फेरेसँगै मोबाइल फोनले पुनर्जीवन पाउँथ्यो । तर अहिले स्मार्टफोनको डिजाइन पूर्णरुपमा […]
फेसबुक मेसेन्जरमा नयाँ फिचर, अरुले च्याटको स्क्रिनशट लिँदा थाहा पाइने
मेटा (फेसबुक) कम्पनीले आफ्नो फेसबुक मेसेन्जर प्लाटफर्मका लागि एकसाथ विभिन्न नयाँ अपडेट जारी गरेको छ । मेटाका सिइओ मार्क जुकरबर्ग आफैले फेसबुक पोस्ट मार्फत मेसेन्जरका नयाँ फिचरका बारेमा जानकारी गराएका छन् । नयाँ अपडेटसँगै फेसबुक मेसेन्जरमा एउटा यस्तो फिचर आएको छ जसको प्रयोगकर्ताले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेका थिए । जस अनुसार गोप्य च्याटका लागि मेसेन्जरमा […]
काठमाडौं । आफ्नो प्रोफाइल लक गरेर फेसबुक अकाउन्टको गोपनीयता बढाउन चाहनुहुन्छ ? यदि तपाईंले आफ्नो प्रोफाइल लक गर्नुभयो भने तपाईंको फेसबुक साथी नभएका मानिसहरुले तपाईंको प्रोफाइलको सीमित कुरा मात्रै देख्न पाउँछन् । प्रोफाइल लक गरिसकेपछि तपाईंको फेसबुक टाइमलाइनका फोटा तथा पोस्टहरु, प्रोफाइल पिक्चर तथा कभर फोटो, स्टोरिज तथा नयाँ पोस्टहरु केबल तपाईंको फेसबुक साथीले मात्रै […]
सूचना-प्रविधि F1 देखि F12 सम्म, यस्ता छन् सर्टकट की को काम
सूचना-प्रविधि ब्लुटुथ भएको नाइकको स्मार्ट जुत्ता, जसमा आफैं तुना बाँधिन्छ
समाचार ६ दशकमा बदलियो चुनाव प्रचार शैली : ‘फिजिकल’देखि ‘डिजिटल’सम्म
सूचना-प्रविधि इन्टरनेट बन्द नहुने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन